किन हिँडे केपी ओली ‘कोर’ टिमसहित लाङटाङ ? « Tulsipur Khabar
किन हिँडे केपी ओली ‘कोर’ टिमसहित लाङटाङ ?
काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले मंगलवार विहान ‘रेडी टू लाङटाङ’ भन्दै हेलिकप्टरसहितको तस्वीर फेसवुकमा हाले । तर, भ्रमण के का लागि भन्ने उल्लेख थिएन । अधिकारीको यो स्टाट्ससँगै एमालेवृतमा एउटा बहस शुरु भयो, ‘किन गए ओली लाङटाङ ?’ त्यसपछि शुरु भयो लाङटाङ जानेहरुको नाम खोजी । जव ओलीसहितको टोलीको नाम थाहा भयो, त्यसपछि एमालेभित्र तरंग पैदा हुन थाल्यो । किन यस्तो भयो ? एमालेका केही नेतासँग हामीले सम्पर्क गर्यौँ ।
स्पष्ट बहुमतका लागि वाम गठबन्धनको कुशल नेतृत्व गरेर चुनाव उतारेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्ना विश्वासपात्रसहित रसुवाको लाङटाङ पुगेपछि हामीले एमालेका केही नेतासँग यसको कारण सोध्यौँ ।
यहीँ क्रममा भ्रमण नेपाली राजनीतिमा भने अरू पेचिलो बनेर प्रस्तुत हुने सम्भावना रहेको एमालेका एक नेताले बताए ।
नेपाली राजनीतिमा भने अरू पेचिलो बनेर प्रस्तुत हुने सम्भावना रहेको यो भ्रमणमा के छ त ? यहीँ जान्न खोजेपछि यसको केही उदेश्यवारे नेताहरुले बताए ।
निर्वाचन सकिएपछि मतदातासँग खुशी साटेर धमाधम काठमाडौँ भित्रिएका नेताहरुसहित अध्यक्ष ओली आगामी रणनीति बनाउन लाङटाङ गएका हुन् । ओलीसँगै महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुबास नेम्बाङ र शंकर पोखरेल मात्र छन् । कोर टिमका प्रदीप ज्ञवाली गुल्मीबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा छुटेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री ओली हुने अभिव्यक्ति दिएपछि पोखरेल विवादमा तानिएका थिए । ओलीसहितका नेता अचानक लाङटाङ हिँडेपछि एमालेभित्र ठूलै भूकम्प पैदा भएको छ । खास गरेर, यो भूकम्प माधव नेपाल र झलनाथ खनाल खेमामा देखिएको छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई भ्रमणबारे जानकारी थिएन । निर्वाचन गठबन्धनका सहयात्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि थाहा पाएनन् ।
ओलीसहितको टोलीले मुख्यतः चार वटा विषयमा रणनीति बनाउने स्रोतको दावी छ । माओवादीसँग एकता प्रक्रियामा अवलम्बन गरिने रणनीति, सरकार गठनसँगै पार्टी र सत्तामा शक्तिमान रहिरहने योजना निर्माणलगायतका विषयमा छलफल गर्न अध्यक्ष ओली आफ्ना विश्वासपात्रसहित लाङटाङ पुगेको एमालेकै एक नेताले बताए ।
स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपतिका आकांक्षी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई कसरी किनारा लगाउने विषय पनि लाङटाङको भ्रमणको एजेन्डा छ । असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृहमा भएको घोषणापछि पार्टी एकताका लागि बनाइएको टोलीमा रहेका खनाललाई हटाएर पछि महासचिव ईश्वर पोखरेललाई राखिएदेखि नै खनाल पार्टीमा किनारा पर्दै आएका छन् ।
उमेर पाक्दै गर्दा महासचिव, अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री पद पाइसकेका खनालले राष्ट्रपतिमा दुई वर्षअघि पनि रहर गरेको एमाले स्रोत बताउँछ । यसपटक पनि खनालले त्यही पदमा आकांक्षा राखेपछि उनलाई किनारा लगाएर राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारीलाई नै दोहो¥याउने मुडमा ओली समूह लागेको पनि स्रोतले बतायो ।
यसो हुँदा बर्दियाबाट पराजित वामदेव गौतम चिढिनसक्ने देखिएपछि अध्यक्ष ओली गौतमलाई कुनै आकर्षक नियुक्तिको अफर गरेर अल्मल्याउने रणनीतिमा लागेको एमालेका एक पोलिटव्यूरो सदस्यले बताए । गौतम क्याम्पका १० सांसद बरिष्ठ नेता नेपाल वा झलनाथ खनालतिर लाग्नबाट रोक्न पनि अध्यक्ष ओलीले विशेष आकर्षक उपहार दिने तयारीमा छन् । नवौँ महाधिवेशनमा पनि संसदीय दलका नेता र कार्यबाहक पार्टी अध्यक्षको लोभ देखाएर गौतमलाई ओलीले आफूतिर पारेका थिए ।
यसो हुँदा बहुमत आफूसँग भएपछि ओली समूह सरकार र पार्टीमा पनि बलियो हुनेछ । अध्यक्षका आकांक्षी नेपाललाई एमालेभित्र थप दबाव बढ्नेछ ।
एमाले स्रोतका अनुसार नेपालपक्षधरका अधिकांश उम्मेदवार विजयी भएर आएको र मन्त्रीको माग भएपछि नेपाललाई कमजोर पार्न खनाललाई तह लगाउने, गौतम रिझाउने अनि नेपाल पक्षका केहीलाई मन्त्री बनाएर नेपाललाई नै समस्या पार्ने विषेश रणनीति तय गर्न ओली कोर टिमसहित लाङटाङ पुगेका हुन् । यसो गर्न सकिएमा पार्टी एकतापछि पनि शक्तिमा रहने अनुमान ओलीको छ ।
यसका लागि आफ्ना विश्वास पात्रहरुसहित आन्तरिक रणनीति तय गर्न लाङटाङ पुगेका हुन् । वाम गठबन्धन एक भएर निर्वाचनमा जाने भएपछि उम्मेदवारी टुंग्याउने क्रममा पनि यो समूहले गोप्य बैठक राखेको थियो ।
कात्तिक १६ गते उम्मेदवारी मनोनयन रहेकाले जितेर आउने उम्मेदवारहरु कुनै पनि हालतमा ओली समूहको भन्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधरको बढी नपरोस् भनेर कात्तिक ९, १० र ११ गते यो समूहले गोप्य बैठक गरेर नामावली तयार पारिएको थियो । तर, वामदेवका १० सांसदसहित नेपाल र ओली पक्षधर सांसद बराबरी भएपछि अर्को रणनीति बनाउन ओली लाङटाङ हानिएको आशंका गरिएको छ ।
एमालेका शीर्ष नेताहरुले रसुवागढी नाकाको निरीक्षण पनि गरेका छन् ।
टिमुरेमा आयोजितक कार्यक्रममा ओलीले भनेका छन्, ‘देशमा लामो समयको बलिदानी र संघर्षपछि तीव्र परिवर्तनको खाँचो छ । राष्ट्रसेवक र नेपाली जनताले आफ्नो बलिदानी परिवर्तनका लागि दिएकाले अव परिवर्तनको जरुरी छ ।’ रातोपाटीबाट
प्रकाशित मिति : २०७४ पुष ४ गते मङ्गलवार
समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम बारे एमालेले आज धारणा सार्वजनिक गर्दै
सर्वदलीय बैठक अनिश्चित भयो
प्रधानमन्त्री देउवाले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै
नेकपा एमाले दाङका पदाधिकारी पदभार ग्रहण
नेकपा (एमालेको सबै प्रकारका सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगन